Izizathu ezihlanu zokuba kutheni kufuneka ungenise kwi-AfrikaArXiv - AfricArXiv
Izizathu ezihlanu zokuba kutheni kufuneka uthobele iAfrikaArXiv
E papashwe ngu UJohanssen Obanda on 1st Julayi 2021 1st Julayi 2021
I-infographic engezantsi iphonononga izibonelelo zokungenisa kwi-AfricArXiv. Ngokungenisa umsebenzi wakho kuthi nakweyiphi na indawo esisebenzisana nayo yokugcina izazinzulu zaseAfrika zalo naluphi na uqeqesho zinokuveza iziphumo zazo zophando kwaye zinxibelelane nabanye abaphandi kwilizwekazi laseAfrika nakwilizwe jikelele ngaphandle kwentlawulo. Onke amaqabane ethu agcina ii-DOI (isazisi sento yedijithali) kunye nelayisensi evulekileyo yokufunda (ngesiqhelo i-CC-BY 4.0) emsebenzini wakho uqinisekisa ukufunyanwa koovimba beenkcukacha zophando Crossref inkonzo yesalathiso.
Funda ukuba ungangenisa njani inqaku lakho kwi ulwazi.africarxiv.org/submit/
Ngenisa inqaku lakho
tags: Intsebenziswanoiyantlukwano yolwimiUkubonakala
iindidi Khetha Udidi Izibhengezo (13) Ukuxhotyiswa ngolwazi (7) Ukusebenzisana (29) IINKCUKACHA-19 (31) Isiganeko (7) Ngokubanzi (9) Izixhobo (1) Ulwazi lwemveli (3) Udliwanondlebe (8) Ukwahluka kolwimi (10) Ukufikelela ngokuVulekileyo (37) Inzululwazi evulekileyo (16) Intsebenziswano ibhengeza (2) Ukuphononongwa ngoontanga (8) IPodcast (1) Ushicilelo (11) Ukushicilela (15) Ingxelo (1) Unxibelelwano lwezeNzululwazi (17) Ungeniso (3)
I-AfricanResearch Kukubhadla okungeyonyani ASAPbio UkuBlackLivesMatter I-BlackVoicesMatter IZiko leNzululwazi eliVulelekileyo ingxoxo Covid-19 Isayensi yeDololonise IngxoxoShift Iingxelo zeDijithali Ukufunyanwa Ukufunyanwa kophando lwaseAfrika Eider Africa Iprojekthi Noyolo Owango iyantlukwano yolwimi Masakhane Ukusetyenziswa koLwimi lweNdalo IYunivesithi yase-Omdurman Islamic kuvulwa fikelela ufikelelo I-OpenCollective Vula iiMephu zoLwazi uvulele isayensi Vula isakhelo seSayensi I-OSF Xa u ilungelo lokuqala Jonga kwakhona ukupapasha I-PubPub uphononongo olukhawulezileyo Ukulungiswa kwakhona Research Unxibelelwano lobuchwephesha Unxibelelwano lwezobuNzululwazi ScienceOpen SDG2 Sudan Iinjongo zoPhuhliso oluPhuhliso I-TCC yase-Afrika Guqula iSayensi translation Ukubonakala
Yazisa #FeedbackASAP ngu-ASAPbio
I-ASAPbio isebenzisana ne-DORA, i-HHMI, kunye ne-Chan Zuckerberg Initiative yokusingatha ingxoxo ekwenziweni kwenkcubeko yokuphononongwa koluntu okwakhayo kunye nengxelo kwi-preprints. Funda isibhengezo esipheleleyo se-ASAPbio kwaye ufumane indlela yokubhalisela umsitho kunye nokuxhasa ukuphononongwa kwangaphambili.
Kwimemori yeFlorence Piron
UFlorence Piron wayengumbhali wezinto zabantu, kwaye esebenza njenge-profesa kwiSebe lezoLwazi kunye noNxibelelwano kwiYunivesithi yaseLaval eQuebec, Canada. Njengommeli oqinileyo woFikelelo oluVulekileyo, wafundisa ukucinga okunzulu Funda ngokugqithisileyo…
Ukuphonononga iinkqubo zokupapasha eAfrika
Iindaba zeYunivesithi yeHlabathi zikhuphe ingxelo enesihloko esithi Study ibalaselisa inkxalabo malunga nezenzo zokupapasha, iveza imiceli mngeni abajamelene nayo abaphandi baseAfrika abaphantsi kweSahara ezikhokelela kumanqaku ambalwa aphononongwe ngoontanga apapashwa kumzi-mveliso wokupapasha kwi-Intanethi ovela kwilizwekazi laseAfrika.